माथि 15 Winstrol फायदा तपाईं Winstrol अनलाइन खरीद गर्नु अघि जान्न आवश्यक छ
/ब्लग/ग्यालरी/माथि 15 Winstrol फायदा तपाईं Winstrol अनलाइन खरीद गर्नु अघि जान्न आवश्यक छ
प्रकाशित 01 / 17 / 2019 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी.
Winstrol को बारे सबै केहि
1। Winstrol के हो? 2। Winstrol कसरी काम गर्दछ?
3। बिजुली निर्माणमा शीर्ष 15 Winstrol फायदाहरू 4। Winstrol Dosage
5। विनस्ट्रोल आधा-जीवन 6। Winstrol पहिचान समय
7। Winstrol Cycle 8। Winstrol पोस्ट चक्र उपचार
9। यो Winstrol नतिजा हेर्न कति लामो हुन्छ? 10। साधारण Winstrol साइड इफेक्ट्स
11। Winstrol साइड इफेक्टहरू कसरी बचाउने? 12। Winstrol Contraindications
13। कसरी Winstrol अनलाइन किन्नुहोस 14। विनस्ट्रोल पाउडर पकाउनुहोस्
एनाबोलिक स्टेरिओइड यकीन छ कि तपाईंको शरीर को वजन को कटौती र एक साथ मांसपेशियों को बनाए राखन को हेरविचार गर्ने? यदि यो स्टेनोजोलोल (Winstrol) स्टेरॉयड, यो अन्य स्टेरियोड्समा फाइदाहरू छन्, र कसरी गर्ने बैंकिङ लायक छ भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्। winstrol किन्नुहोस्.
यदि तपाईं बोसो जलाउन र दुबला शरीरको मासुको चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ जिमको सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र केहि कम्पाउड कार्यआउट गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, यसले स्थिरता र नियमित प्रशिक्षण चाहिन्छ। एक मात्र निश्चित तरीका तौल घटाउनु चाँडै, अधिकतम सहनशीलता पाउनुहोस्, र स्टेरिइड पूरक लिनुमा मांसपेशियों लाई प्राप्त वा बनाए राख्नुहोस।
अन्य स्टेरियोड्सहरूको विपरीत जसको साइड इफेक्ट फायदाहरू बढ्छ, winstrol प्रयोगकर्तालाई धेरै फाइदाहरू छन्। एकै कुरामा तपाईंले थाहा पाउनु भनेको केहि औषधीय प्रयोगहरू पनि हो।
1. Winstrol के हो?
Winstrol को विवरण
यस पृष्ठमा ल्यान्डिंग गर्नु अघि, तपाईंले सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्नु भएको हुन सक्छ, "क्वीस्ट्रोल के हो र यसले के गर्दछ?" खैर, यस लेखले तपाईलाई जान्न चाहनु भन्दा पनि अनावरण गर्नेछ।
Winstrol वा स्टेनोजोलोल एक हो सिंथेटिक स्टेरियोड्स दुवै anabolic र androgenic गुण संग। यसको कच्चा रूप मा, यो जैविक रासायनिक यौगिक CAS no। 10418-03-8। स्ट्यानोजोलोलोल dihydrotestosterone (DHT) बाट प्राप्त हुन्छ। गठन प्रक्रियाले हाइड्रोजनको साथ अक्सिमेथोलोनको 3-keto-aldehyde सङ्कलन गर्दछ।
Winstrol पनि मौखिक वा इंजेक्शन औषधिको रूपमा उपलब्ध छ। यसले प्रोटीन संश्लेषण शुरू गर्दै र मांसपेशियों को वृद्धि को तेज गरेर कार्य गर्दछ। यसको अतिरिक्त, अधिकतर मान्छे यसलाई काटने वाला चक्र को समयमा एक कटाई तर मजेदार भौतिकी प्राप्त गर्न को लागि स्टक। संयुक्त राज्य अमेरिका एफडीए ले कक्षा III पदार्थ को रूप मा सूचीबद्ध गरेको छ सहित ज्यादातर देशों मा दबाइ को निषिद्ध गरिन्छ।
एनालिलिक गुणहरू प्रदर्शनको बावजूद, winstrol ले पनि चिकित्सक प्रयोगहरू प्राप्त गर्दछ। उदाहरणका लागि, यसले मांसपेशी बर्बाद गर्ने रोगहरूको उपचार गर्न सक्दछ, हेमोग्लोबिनको उत्पादनलाई उत्तेजित गर्दछ र एन्जिओमेमामा उपचार गर्दछ। यद्यपि स्टेनोजोलोल केवल एक वास्तविक डाक्टरको नुक्सानमा उपलब्ध छ, तपाईं अझै फेला पार्न सक्नुहुनेछ विन्डस्ट्रोल बिक्रीका लागि धेरै अनलाइन स्टोरमा।
यो औषधि टेस्टोस्टेरोनको तुलनामा अक्टोबरको तेस्रो हो। एक C17-अल्फा alkylated स्टेरॉइड हुनु, stanazolol मा अद्वितीय संरचनात्मक गठन छ जो dihydrotestosterone हार्मोन को परिमार्जन देखि उत्पन्न छ। यस कारणको लागि, पदार्थ isrogenic भन्दा 10x anabolic हो।
Anabolic रेटिंग 320 100
एण्ड्रोनिकनिक मूल्याङ्कन 30 100
Winstrol पहिले 1959 मा अस्तित्वमा आयो। विन्न्ट्रोप ल्याबले यसलाई venous र टर्मिनल मांसपेशी बर्बाद गर्ने अवस्थाको उपचारको उद्देश्यको साथ विकास गर्यो। यस औषधिको नाइट्रोजन अवधारण क्षमताहरू यसले मांसपेशी बर्बाद गर्ने अवस्थाहरूको लागि सही पर्चा बनाउँछ। 1962 द्वारा, यसले पहिले नै खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) को स्वीकृति पाएको थियो।
विन्स्ट्रोलले के गर्नु पर्यो डपिंग विवाद यो 1980s ओलम्पिकको समयमा थियो। म व्याख्या गर्नेछु। एक्सएनएनएक्सएक्स एथलेटिक्समा, बेन जॉनसनले जेन्यूमएक्सएम दौडमा हाल्दा सुनको पदक जित्यो। उनले अमेरिकी ओलम्पियन, कार्ल लुईसलाई मारेर आफ्नो नयाँ रेकर्ड स्थापित गरे।
एक विजयी, विश्वव्यापी स्प्रेटर भए तापनि, जसनसनले आफ्नो प्रदर्शन बढाउन स्टानोजोलोल प्रयोग गर्नको लागि दृढ बनाएको थियो। नतीजा, अधिकारियों आफ्नो पदक को छीन लिया र पछि उनलाई ओलंपिक देखि निलंबित।
यस एनाबिक स्टेरॉयड प्रभावकारी साबित भएपछि, धेरै एथलीटहरूले खेलकुदको लागि डप्पिंग गर्न उपयुक्त गरे। तथापि, अमेरिकी सरकार स्टेरियोड्स प्रयोगमा कडा कडा आउँथ्यो। नतीजा, यो उत्पादन, प्रयोग, र यी पूरक बेचन कानुनमा कडा कडा।
Winstrol ब्रान्ड नाम
ध्यान दिनुहोस् कि यस औषधको कच्चा रूप अफ सेतो क्रिस्टलीय रसायन हो। धेरै मानिसहरूले पत्ता लगाउँछन् विस्फोट पाउडर स्वाद बलियो हुन।
2. Winstrol कसरी काम गर्दछ?
Winstrol एक heterocyclic स्टेरॉइड हो र एन्ड्रोजन रिसेप्टर्स को लागि बाध्यकारी बाध्यता सम्बन्ध संग। यो केवल प्रोटीन संश्लेषण न केवल कोलेजन को गठन को बढावा देगा। दबाइले प्रोटीनको एनालिलोलिज्मको गति बढाउँछ र फलस्वरूप सीटाटालिक गतिविधिहरू उत्तीर्ण गर्दछ।
यसले सेक्स हार्मोन बाइसिङ ग्लोबिनन (SHBG) स्तरहरूलाई कम गर्छ, त्यसकारण नि: शुल्क टेस्टोस्टेरोनमा वृद्धि बढिरहेको छ। त्यसपछि, तपाईंको शरीरले एनाबोलिक गुणहरू मान्दछ।
सबैभन्दा साधारण anabolic स्टेरॉइड दुष्प्रभाव एस्ट्रोजेनिक विशेषताहरू हुन्। यद्यपि, विन्डस्ट्रोल कहिल्यै एस्ट्रोजेनमा उभिलो हुँदैन। कारण ए-रिंग जसले 3-keto समूहलाई प्रतिस्थापन गरेको छ, औषधि एक सुक्खा स्टेरॉइड प्रतिपादन गर्दछ।
यसको संरचनामा मेथिल समूहको उपस्थितिले शरीरमा स्टेनोजोलोलको जीवनी वृद्धि बढाउँछ। जीएनएसएमएक्स दिनको रूपमा विन्डस्ट्रोल नतिजाहरू उल्लेखनीय हुनेछ।
3. शरीर निर्माणको मुख्य 15 Winstrol फायदाहरू
यदि तपाईं winstrol बाट सकारात्मक रूपमा लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई सँग जोड्नु पर्दछ लगातार कसरत र स्वस्थ आहार। धेरैजसो हाम्रा शरीरहरू लागूपदार्थका क्रिया र प्रतिक्रियाको सन्दर्भमा भिन्न हुन्छन्, पर्ची पछि र एक छोटो चक्रलाई दुबै प्रभावहरूलाई तपाइँले साइड इफेक्टबाट बचत गर्नेछ।
Winstrol फायदा 1: एस्ट्रोजन अनुहार को शून्य जोखिम
केडीईलेस्ट्रोल सबै अन्य एनाबिक स्टेरियोड्समध्ये खडा गर्छ भन्ने कुराले यो तथ्य हो कि यो एस्ट्रोजनमा परिवर्तन गर्दैन। पुरुष प्रयोगकर्ताहरूका लागि, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो जुन तपाइँ मांसपेशिहरु बढाउने औषधिमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
मलाई बयान गर्न देउ। शरीरभित्र एकपटक, स्टेरियोड्स एस्ट्रोजेनमा परिणत हुन्छन्। एस्ट्रोजेनिक्स साइड इफेक्टहरू प्रसन्न हुनेछैनन्, खास गरी जब महिलाहरु तपाईले वरिपरि हिंड्ने महिला स्त्रीहरु संग हिड्नु पर्ने हुन्छ, जुन कुनै सामाजिक समाजमा गर्व हुनेछ।
यदि कुनै पनि चीज हो कि अरुणताकरणको शून्य जोखिमको सन्दर्भमा तपाईले छोड्नु हुनेछ भने, यो एभार मिठाई ग्रन्थिकल बनाएर विन्डस्ट्रोल हो। यी दुई स्टेरियोड्सले एस्ट्रोजेन रूपान्तरण वा पानी अवधारणको डोमिनो प्रभावलाई प्रदर्शन गर्दैन।
Winstrol फायदा 2: मांसपेशी लाभ
Winstrol प्रोटीन को anabolism बढन मा एक भूमिका निभािन्छ। यो मांसपेशिहरु को कोशिकाहरु लाई प्रोटीन को उत्पादन र बनाए राखन को कारण हो, यसैले, मांसपेशी जन र बल दुवै बढन सक्छ। चयापचय प्रक्रियाहरु मा वृद्धि को कारण, शरीर मा अधिक adenotriphosphate पैदा गर्दछ, जो मांसपेशियों को निर्माण मा प्रमुख भूमिका लेता छ।
डेसा स्टेरॉइड र केहि कम्पाउन्डआउटआउटको साथ stanozolol माथि ट्याप गर्नुहोस्, र तपाइँसँग तपाइँको विन्डस्ट्रोल परिणामहरू वायरल जाउनु अघि र पछि हुनेछ।
Winstrol फायदाहरू 3: बलियो र सहनशीलता
कुनै पनि पेशेवर बिल्डरबिल्डर प्रमाणित हुनेछ र पुष्टि गर्नुहोस् कि स्टेरॉइड, जसले तपाईंको सहनशीलता बढाउन बिना मांसपेशिहरु लाई मात्र बढाउँछ बेकार छ।
तो, stanozolol आफ्नो बल मा सुधार कसरि गर्दछ? मलाई बयान गर्न देउ। ड्रगले तपाईंको शरीरमा रातो रगत कक्षहरूको उत्पादन बढाउँछ। चूंकि यी कक्षहरू ओक्सीजन लिनको लागि जिम्मेवार छन्, मांसपेशिहरु लामो र कठिन अभ्यास सहनका लागि पर्याप्त ओक्सीजन पनि हुन्छन्।
Cortisol-blocking capabilities को लागी धन्यवाद, विन्डस्ट्रोल रिकभरी प्रक्रियामा छिटो र तनाव वा अवरोध रोक्न। यो कारण यो हो कि प्रयोगकर्ताहरु लाई साइकिङ वा रेसिङ खेलहरु, आफ्नो प्रदर्शन को बढावा को लागि स्टेरियोड्स मा बैंक जस्तै प्रतिस्पर्धी खेलहरु मा भाग ले रहे हो।
Winstrol फायदाहरू 4: बल्किंग साइकल
डाक्टरले विन्डस्ट्रोललाई रोगीहरूलाई निर्धारित गर्न सम्भव छ जुन सामान्य वजन प्राप्त गर्न वा सामान्य वजन बृद्धि गर्न खोज्न सक्छ। यद्यपि, यो सही बिन्दु होइन जुन म भर पर्न चाहन्छु।
महिलाहरु लाई संसोधित र एरेजनिक साइड इफेक्ट्स को कारण एनालिक स्टेरियोड को साफ गर्न को लागि संधै सलाह दिइएको छ। यसको विपरीत, शरीर सौष्ठव उद्योगमा लैंगिक सन्तुलनको साथ केही उत्कृष्ट समाचारहरू छन्। महिलाहरूको लागि विन्यास तपाईंको शरीर दुलही, लामो जीनिटल्स, वा गहिरो भित्री कुर्सियों को बारे मा घेरने को बिना आफ्नो दुबला मांसपेशियों को बढावा दिन को लागि निश्चित छ।
Winstrol फायदाहरू 5: Androgenic Side Effects को कम जोखिम
Winstrol कम-स्लिङ्ग एन्ड्रोजेनिक रेटिंगको साथ केहि एनाबोलिक स्टेरियोड्समा छ। त्यसैले पुरुष र महिला प्रयोगकर्ता दुवै बाल वा मुँहासेको चरम र असामान्य हानि अनुभव गर्न सम्भव छ।
यद्यपि, यसको अर्थ यो होइन कि तपाइँ पूर्णतया यी winstrol साइड इफेक्टहरूबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ। मलाई यहाँ केही प्रकाश बहाइदिनुहोस्। केहि व्यक्तित्वहरु लाई आनुवंशिक रूप देखि पनि एकदम जोखिम मा पनि एरेजनिक अपशॉट को संवेदनशील हुन्छ। यदि तपाईं यस वर्गको अधीनमा गिरिनु हुँदैन भने तेरो लागी औषधि राम्रोसँग हुनेछ।
Winstrol फायदाहरू 6: दुबई रूप (काट्ने चक्र)
लगभग सबै एनाबिकिक स्टेरियोडले बढ्दो प्रभाव ल्याउन हद सम्म कि मांसपेशियों को समूह मास्क गरिएको छ। यदि तपाईं एक प्रो बिल्डर बिल्डर वा प्रतियोगी एथलिट हुनुहुन्छ भने, बल्क उपस्थिति प्रतियोगितामा तपाईंको प्रदर्शनको साथ हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
विन्डस्ट्रोलको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि प्रयोगकर्ताले दुबई मांसपेशिहरु लाई मात्र राख्न मद्दत गर्दछ। यो कारण यो हो कि औषधि काटने चरण मा प्रयोग गरिन्छ एक चक्र को समयमा शरीर मा वसा को कम गर्न को लागि। Primobolan संग क्लब winstrol र तपाईंसँग vascular उपस्थिति संग एक कठिन नजर हुनेछ।
Winstrol फायदाहरू 7: कुनै पानी अवधारण छैन
एनाबोलिक स्टेरियोड्स मा उपस्थित एन्ड्रोनिकनिक हार्मोन सोडियम प्रतिधारण को मुख्य कारण हो, यसैले, शरीर को प्रवृत्ति को पानी को पकडे। अधिक एस्ट्रोजेनिक औषधीहरू छन्, तपाईंको शरीरको बिरुवाको थप पानी। यसबाहेक, यो पक्ष प्रभाव नौका र हाइपरटेन्सनसँग जोडिएको छ।
अहिलेसम्म, त्यहाँ डाईरेटिक गुणहरूसँग मात्र तीन स्टेरियोड्स छन्। यो स्टेनोजोलोल, एभार र टर्नबोलोन हो। यदि तपाईं को लाभ को तुलना गर्न को लागी थिए Winstrol vs anavar, तपाईं बुझ्न चाहानुहुन्छ कि दुवैको शरीर सौष्ठव प्रभावहरू छन्। यद्यपि, विनीले तपाईंलाई अन्य तीन स्टेरियोड्स भन्दा बढी मांसपेशीहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
Winstrol फायदाहरू 8: चिकित्सकीय प्रयोग
Winstrol पछि दिमाग मा मांसपेशियों को बर्बाद अवस्था को नर्सिंग को इरादा संग स्टेरॉयड विकसित गरे। Stanozolol को प्राथमिक चिकित्सकीय प्रयोग एन्कोओमेमामा को उपचार मा छ, जसलाई अनुहार, गले, या जीनियल्स को सूजन शामिल गर्दछ।
अन्य शर्तहरु जुन तपाईंलाई विन्डस्ल्रोल को पर्चे मा राख्छ, डिब्यूबिटस अल्सर, एप्लोस्टिक एनीमिया, ओस्टियोपोरोसिस, फाइब्रिनोलाइटिक गतिविधि कम भयो, या वृद्धि को विफलता कम भयो। यसबाहेक, स्टेरिइड विशिष्ट विकारहरूको लागि अन्तिम उपाय हो, जुन केवल डेटाबेस प्रक्रियाहरू उल्ट्याएर व्यवस्थित हुन सक्छ।
के मैले त्यो किस्टस्ट्रोल मानव र जनावर स्टेरॉइडको रूपमा डबल्सलाई उल्लेख गरेको छु? अब तिमीलाई थाहा छ! घोडा दौड जस्तै प्रतिस्पर्धामा भाग लिने जनावरहरूको प्रदर्शन को बावजूद, विनी एक पशु औषधि पनि हो। यसले ब्वाँसोमा वृद्धि बढाउँछ र बिल्लियों र कुत्तों मा अधिकांश पोषण रोगहरु को प्रबंधन गर्दछ।
Winstrol फायदाहरू 9: स्टेरॉइड स्ट्याकिंगको लागि सही
यद्यपि त्यहाँ विभिन्न भिन्नताहरू छन् anabolic steroids, तपाईं तिनीहरूलाई कैंडी जस्तै स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्न। उचित स्टेरॉइड स्ट्याकिंग उत्कृष्ट परिणामको गारंटी दिन्छ। तथापि, परेशानीमा आउँछ जब तपाइँसँग अन्य चीजहरूसँग राम्रो मिश्रणहरू चिन्न जान्नुहुन्छ, र तपाइँलाई कसरी राम्ररी मिल्दो र मेल खान सक्नुहुन्छ।
मलाई अनुमति दिनको लागि अनुमति दिनुहोस् किन तपाईले अन्य औषधिहरू संग Winstrol स्ट्याक गर्नु पर्छ।
अधिकांश एनाबोलिक स्टेरियोड्स शरीरको सेक्स हार्मोन-बाइसिङ ग्लोबिनलाई बाँध्छ। SHBG को उच्च मान्यता प्रयोगकर्ताको शरीरमा स्टेरॉइडको कार्यलाई बेवास्ता गर्दछ, यसैले, औषधि बेकार बनाउन।
यो मामला विन्डस्ट्रोल संग भिन्न छ किनकी यसले शरीर मा SHBG को स्तर को कम गर्दछ। त्यसकारण, तपाईं यसलाई धेरै स्टेरियोड्ससँग स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्छ र अझै पनि दुबला मांसपेशिहरु र उत्कृष्ट वासुलर आकार पाउनु हुन्छ। हाम्रो उपयुक्त Winstrol संयोजन ट्रेनबोलोन, Cardarine, Primobolan, andarine, anavar, या masteron समावेश गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन स्ट्याकिंगको लागि पनि राम्रो छ तर कम मात्राहरू सुनिश्चित गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सुगन्धको प्रभावको साथ समाप्त गर्नुहुन्न।
Winstrol फायदाहरू 10: उच्च बायोवेटिव
स्टेरॉयडको जीवनीताले सधैं आफ्नो शक्ति निर्धारण गर्नेछ। Stanozolol को लागि, त्यहाँ यसको संरचना मा एक मेथिल समुह हो जसले यसलाई 24 घण्टा सम्म बायोव्वाउटा बनाउँछ। यो मांसपेशिहरु लाई बढावा दिन को लागी बिना जिगर को माध्यम ले पारित गर्न सक्छ।
Winstrol फायदाहरू 11: प्रशासनको बहुविध तरिका
तपाईं या तो winstrol मौखिक या intramuscular इंजेक्शन को माध्यम ले ले सकते हो। पूर्व दिन दुई पटक प्रशासित छ किनकि यसको आधा-जीवन लगभग9घण्टा हुन्छ। यसको विपरीत, उत्तीर्ण एक लामो आधा जीवन छ, यसरी, एक दिन एक पटक लिइयो।
यदि हामी उपभोक्ताहरूको रिपोर्टहरू जान्थ्यौं भने धेरै प्रयोगकर्ताहरूले विश्वास गर्छन् कि इंजेक्शन योग्य फारमले सर्वोत्तम परिणामहरू पाउँछ। यद्यपि, एक कुराले उनीहरूलाई घृणित बनाउनु पर्छ पीडादायी इंजेक्शन हो, जो प्रशासन पछि पनि जारी रहन्छ।
के तपाईं जिगर विषाक्तता पक्ष प्रभाव बाईपास गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसपछि तपाईँले गोली निगल गर्नुको सट्टामा इन्जेक्नु पर्दछ। इंजेक्शन को माध्यम ले, विन्डस्ट्रोल को सीधा सर्कल प्रणाली मा प्रवेश गरे बिना लिभर को पार गरे।
Winstrol फायदाहरू 12: केहि साइड इफेक्ट्स
कुनै अन्य औषधि जस्तै, winstrol पनि साइड इफेक्ट पनि छ। तथापि, जब तपाईं छोटो-चक्र चक्रमा राखिएको सिफारिस विन्स्ट्रोल खुराकमा छड्नुभयो भने, तपाईंले सानो साइड इफेक्टको अनुभव गर्नुहुनेछ।
सबैभन्दा घृणित अप्ठ्यारोहरू जुन व्यक्तिहरू घृणा हुन्छन्, एन्ड्रोजनिक र एस्ट्रोजनिक हार्मोनहरू हुन्। यस अवस्थामा, विन्डस्ट्रोलमा कम र एन्ड्रोनिकिक मूल्याङ्कन छ र यो एस्ट्रोजन मा परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना छैन। त्यसोभए तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ!
Winstrol फायदाहरू 13: महिलाहरूलाई अनुकूल
अधिक anabolic स्टेरॉयड एन्ड्रोजेनिक प्रतिक्रिया को उच्च संभावना को कारण महिलाहरु मा contraindicicated हो। अरेजनको उच्च स्तर पुरुषमा बालबालिकाको क्षति, महिलाहरूमा गहिरो आवाज, र केहि अन्य मजेदार साइड इफेक्टहरूको कारणले गर्दा तपाईं गर्व गर्नुहुन्न।
यो स्टेनोजोलोलको साथ फरक छ किनकी यो केहि स्टेरियोड्स जसको हो जसको एन्ड्रोनिक्स रेटिंग कम छ। यस औषधिको एस्ट्रोजन र एनाबोल अनुपातको बीचमा द्रुत तुलना तुलनात्मक रुपमा 10.7: 1 र 1: 1 मा समेट हुनेछ। यी मानहरूको साथ, तपाईं अहिले बुझ्न सक्नुहुन्छ किन जिए कटलरको रूपमा नबिर्सिकन तपाईं महिलाहरूको लागि विन्डस्ट्रोलमा बैंक किन सक्नुहुन्छ।
12 चरणहरूमा स्टेरियोड्स पाउडर आपूर्तिकर्ता कसरी छनौट गर्ने?
Winstrol फायदाहरू 14: पशु स्टेरॉयड
पशु चिकित्सामा, stanozolol (Winstrol / winny) धेरै चिकित्सकीय प्रयोगहरू पनि साथसाथै एक anabolic स्टेरॉइड ब्रेग गर्दछ। सुरुमा, पशुधनको लागि इंजेक्शनयोग्य फारम मात्र थियो। घोडा रेसिङ वा कुनै पनि अन्य सम्बन्धित पशु प्रतियोगिताको लागि डप्पिंग गर्दा केही व्यक्तिहरूले औषधि प्रयोग गर्नेछन्।
Winstrol फायदाहरू 15: गति र चपलता
तपाईंले शायद सोधेको छ किन किन एक सुन्दर एथलीट स्टेरॉइडको लागि जान्छ, जुन केवल मांसपेशिहरु बनाउनेछ र बल्क प्रभाव छोड्छ। खैर, विन्डस्ट्रोल केवल तपाईंको स्टाम्ना बढाउनु हुनेछ तर सामान्यतया तपाईको चपलता र गति बढाउन मद्दत गर्दछ। आखिर, एथलीटहरूले उनीहरूको मर्द्युकोटिको सट्टा तिनीहरूको प्रदर्शनको हेरविचार गर्नेछन्।
यदि हामी सबैलाई छलफल गरौं विस्फोट लाभहरू, मलाई लाग््छ कि हामी एक पूरी पुस्तक को आवश्यकता हुनेछ। केहि थप फाइदाहरू हड्डी घनत्व बढाउन, tendons र ligaments को मजबूत बनाउन, र एक कठिन तर vascular उपस्थिति उत्पादन।
Winstrol ले तपाइँलाई मौखिक वा इंजेक्शन योग्य डोजजको बीच चयन गर्न बहुमुखीता प्रदान गर्दछ। तिनीहरू दुवै C17-ए स्टेरियोड्ससँग सक्रिय हार्मोनको रूपमा स्टेनोजोलोलको रूपमा लिन्छन्। औषधि प्रबन्ध गर्न सही समय अघि खाना वा खानाको समयमा हो।
Orally, stanozolol ट्याब्लेट वा गोली फारममा उपलब्ध छ। चूंकि winstrol आधा जीवन नौ घन्टा सम्म फैलिएको छ, तपाईं आफ्नो bioavailability को बनाए राख्न को लागि एक दिन दुई पल्ट लिन आवश्यक हुनेछ।
मौखिक खुट्टा 40 र 80mg बीच फरक हुन्छ। एक साधारण Winstrol खुराक केहि कारकहरु जस्तै स्टिरोइडहरू, सहनशीलताको स्तर, र जुन तपाईं प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ अनुभवको विषय हो। ध्यान दिनुहोस् कि उच्च खुसीको साथ तपाईंको जिगरलाई अचम्म लागेर तपाईले अपरिवर्तनीय साइड इफेक्टहरू संग अपरेशन लिनुहुनेछ।
अधिकतर अवस्थामा, विन्डस्ट्रोल को लागी बिक्रीको लागि 10mg वा 50m ट्याबलेटको प्याकेजमा उपलब्ध छ। पुरुष प्रयोगकर्ताहरू एक उच्च खुसीको लागि जान्छन् तर महिलाहरूलाई कम रेंजमा हुनुपर्छ।
महिला जो उच्च खुराक खरिद गर्न गर्दछन्, बाहिर निकाल्न हुँदैन किनकि उनिले 12.5mg / दिनमा खण्डमा तिमाही टुक्रा र पर्वमा बिस्तारै विभाजन गर्न सक्दछन्। फलस्वरूप, पुरुष जो Winstrol किन्नुहोस् 10mg ट्याब्लेटका साथ अझै प्रति दिन पाँच क्याप्सुल प्रयोग गर्न सुरक्षित छ।
जितना विनी ट्याब्लेट फारममा उपलब्ध छ, केहि ब्रान्डहरूले पनि दैलो राज्यमा औषधी उत्पादन गर्छन्। तरल पदार्थ दूध हो र एक बलियो स्वाद छ। तथापि, तपाईं केहि रस लिन वा आफ्नो छनौट पेय गरेर स्वाद बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
इंजेक्शन योग्य खुराक
यदि तपाईं इंजेक्शनहरू मनपर्ने चाहनुहुन्छ भने, एक विन्डोज्रोल बिजुली बनाउने खुट्टा अर्को 24 घण्टाको लागि तपाईँलाई अन्तिम हुनेछ। खुट्टा बिस्तारै बिल्डरबिल्डर, मध्यवर्ती प्रयोगकर्ता, वा स्टार्टर हो कि आधारमा 50 र 100mg बीचमा पर्दछ।
तपाईं आफ्नो बट, माथिल्लो हात, वा जांघमा इन्जेक्शन गर्न सक्नुहुनेछ।
5. विनस्ट्रोल आधा-जीवन
खुट्टाको एक लिको प्रकारमा आधी जीवनको विन्डस्ट्रोल। उदाहरणको लागि, मौखिक खुराकसँग 8-9 घण्टाको जीवनीता छ। इंजेक्शन को लागी, अवधि लामो समय सम्म 24 घण्टा हो।
6. Winstrol पहिचान समय
यदि विरोधी-डोपिंग परीक्षण गरिन्छ, क्रमशः तीन र आठ हप्ता हप्ताको क्रमबद्ध हुन्छ। यो संख्याले संकेत गर्दछ कि विन्डस्ट्रोल सक्रिय एथलीटहरूको लागि फायदेमंद हुने छैन किनकि ड्रग्सको फ्याक्किङ चिसो पूरा भएपछि 2-4 टाढा टाढा टाढा।
7. Winstrol Cycle
मानक winstrol चक्र छ छ6हप्ता भन्दा बढी। तथापि, ती व्यक्तिहरूले स्टेरियोड्स प्रयोग गर्ने अनुभव अझै पनि अधिकतम आठ हप्तासम्म लिन सक्दछ। यो समझदार छ कि तपाईंले चरणको अन्त भन्दा दुई हप्ताको खुराक घटाउनुहुन्छ। यद्यपि ड्रग स्टेरॉइड स्ट्याकिंगको लागि कोठा छोड्छ, तपाईले यसलाई C17-aa स्टेरियोड्सको साथ प्रयोग गर्नुपर्दैन।
जबकि महिलाहरु 10mg / दिन को दैनिक खुराक को बनाए राखन को लागि, पुरुष bodybuilders को औसतन 50mg / दिन लेना चाहिए। तथापि, प्रो प्रयोगकर्ताले केवल चक्रको अन्तिम दुई हप्ता भित्र प्रति दिन 100mg गर्न सक्दछ।
8. Winstrol पोस्ट चक्र उपचार
Winstrol चक्र को अन्त मा, तपाईंलाई अवसाद र हार्मोन दमन को कम गर्न केहि थेरेपी देखि गुजरना चाहिए। यो तपाईं या त तपाईं सामान्य टोस्टरोस्टेरोन स्तर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाइँले छ हप्ताको समयमा प्राप्त गरेको मांसपेशिहरु लाई हराउनु भयो। टेस्टोस्टेरोनको न्यून स्तरले तपाईंलाई निराश र कमजोर बनाउनेछ।
9. यो Winstrol नतिजा हेर्न कति लामो हुन्छ?
स्टानोजोलोलले तुरुन्तै नयाँ चक्र प्रविष्ट गर्न प्रभाव पार्छ। तथापि, दृश्य हप्ता दोस्रो हप्ताको समयमा देखा पर्दछ। 14 दिनबाट, पछि देखि मुस्कानको साथ मिररबाट टाढाको पक्का हुनुहोस् अघिल्लो र पछिको जीत तस्बिरहरू तपाईंलाई चल्नेछ।
सम्झनुहोस् कि यो मांसपेशी वृद्धिले प्रत्येक प्रयोगकर्ताको उत्कृष्ट परिणामको गारंटी दिन्छ। एक फटाई, मांसपेशी र छाडिएको शरीरको लागी, तपाईंलाई आफ्नो आहार, पोषण, र व्यायाम शासनमा काम गर्न आवश्यक पर्दछ।
यहाँ6- 8 हप्ता चक्र भित्र कस्तो आशा गर्ने एक ब्रेकडाउन हो;
1 कुनै अवलोकन योग्य परिवर्तनहरू छैनन् तर शरीर केही अतिरिक्त पानीको वजन गुमाउनेछ
2 सुधारिएको बलको साथ उल्लेखनीय मोटा हानि
4 बढेको भाइरस र अधिकतम शक्ति
6 राम्रो तरिकाले परिभाषित मांसपेशी उपस्थिति एक सानो पेट र उन्नत प्रदर्शन संग
कसरी winstrol bodybuilding नतिजाहरूको आनन्द लिन मा केहि लेफ्टवे सुझावहरू जाँच गर्नुहोस्;
प्राकृतिक मांसपेशी लाभको लागि नियमित रूपमा तपाईंको workouts मा रहनुहोस्
म्याकडोनल्ड्स बर्गरहरू माथि उज्यालो र मीठो, श्वेत, वा चिसो खानेहरू कोसिस गर्ने
अल्कोहलबाट टाढा रहनुहोस् जबसम्म तपाई स्थायी रूपमा तपाईंको लिभरलाई हानिकारक गर्ने आत्महत्या मिशनमा हुनुहुन्न
तपाईंको जिगर हरेक समय पानीको मात्रामा अचम्म लाग्यो
भिटामिन सी जस्ता अन्नपूर्ण फलहरू जस्तै अमीर खाद्य पदार्थहरू लिनुहोस्
तपाईंको कसरत शासनमा कार्डियो व्यायाम समावेश गर्नुहोस्
हरियो सब्जियों संग मित्रता हड़ताल
10। साधारण Winstrol साइड इफेक्ट्स
Winstrol को प्रयोग को परिणाम एक व्यक्ति देखि हार्मोनल अंतरहरु को कारण अर्को देखि भिन्न हुन्छ। Anabolic स्टेरियोड साइड इफेक्ट्स अनुभव को मृत्यु को रूप मा निश्चित छ, तर तपाईं खुराक देखि अधिक नहीं र एक सानो चक्र को लागि जा गरेर जोखिम को कम गर्न सक्छन्।
विशेष गरी पोस्ट चक्र चरणको समयमा टेस्टोस्टेरोन दमन
खराब कोलेस्ट्रॉलको स्तरमा वृद्धि, यसैले, स्ट्रोक वा हृदयको आक्रमणको खतरा बढ्दैछ
संयुक्त दुखाइको कारण स्लोवाइल तरल पदार्थको कम स्तरको कारण सुकेकोपनको कारण
चक्र पछि अवसाद
छोटो नतिजा, जुन लगभग चार हप्तासम्म रहन्छ
महिला प्रयोगकर्ताहरु मा भाइरस
प्रिमियर एपिफिसल परिपक्वता
11। Winstrol साइड इफेक्टहरू कसरी बचाउने?
कोलेस्ट्रॉल पूरक प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईंको हृदय स्वस्थ छ भने, केहि लगातार चेक-अप गर्न निश्चित गर्नुहोस्। एक बढी महत्त्वपूर्ण कदम तपाईंको आहारमा राम्रो एचडीएल कोलेस्ट्रलसँग खनिजहरू समावेश गर्न हो। उदाहरणका लागि, यस winstrol साइड इफेक्ट को प्रबंधन को लागि माछा को तेल सबै भन्दा सुलभ पूरक को बीच मा छ।
तपाईंको टेस्टोस्टेरोन स्तर बढाउनुहोस्
टेस्टोस्टेरोन को न्यून स्तर पोस्ट चक्र अवधि को समयमा हुन्छ जब यो हार्मोन को प्राकृतिक उत्पादन बंद छ। यो साइड इफेक्टसँग सम्झौता गर्ने निश्चित तरिका चक्रको अन्तिम दुई हप्ता भित्र केहि टेस्टोस्टेरोन पूरक समावेश गर्दछ।
TUDCA, Liv-52, NAC, वा दूध थिस्टल जस्तै पूरकहरू तपाईंको लिभरको सुरक्षा हुनेछ।
चक्र चक्र उपचार (पीटीसी)
सामान्यतया, एन्ड्रोजेनिक स्टेरियोड्स र अन्य सबै कृत्रिम हार्मोनले तपाईको प्रणालीमा खाली गर्न2-3हप्ता लिनेछ। यस अवधिको समयमा, तपाई अफसेट गर्न औषधि थेरेपीमा जानुहोस् र तपाईंको हार्मोनल स्तरमा स्थिर बनाउनुहोस्। उदाहरणका लागि, नोलभ्याडेक्स वा क्लोमेडको प्रयोग गरी टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन पुनर्स्थापित गर्नेछ।
पीटीसी अवधि दुई देखि चार हप्ताको बीच फरक हुन्छ।
12। Winstrol Contraindications
अध्ययनले देखाउँछ कि स्टेरियोड्स भ्रूण masculinization को नेतृत्व गर्न सक्छ
प्रोस्टेट र स्तन कार्सिनोमको शिकार
स्टेरियोड्स को सम्भावना संग व्यक्तित्व
बच्चाहरु र किशोरहरु
13। कसरी Winstrol अनलाइन खरिद गर्नुहोस्
अधिकांश राज्यहरूले एनाबिक स्टेरियोड्सको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यसैले, विन्डस्ट्रोल बिक्रीको लागि पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ जबसम्म तपाई अन्य देशहरूमा पुग्नुहुन्छ जुन यसको प्रयोगको वैधानिक छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा, अष्ट्रेलिया, यूके, र क्यानडामा, यो कानून विरुद्ध हो भने, स्टेरॉइडलाई स्वामित्व, प्रयोग वा वितरण गर्न। तथापि, दुर्व्यवहार मात्र डाक्टर बाट एक मान्य प्रिन्ट संग अनुमति छ।
Winstrol कानूनी खरीद
प्रतिबन्धहरू यो भालुको कारणले, winstrol मात्र फेला पार्न सकिन्छ कालो बजार। ओभरकेभर बजारमार्फत तपाईले के खोज्दै हुनुहुन्छ तर तपाईले वास्तविक उत्पादन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
उदाहरणका लागि, विनीको इंजेक्शन योग्य एक अलिक राज्यमा छ। जबसम्म यो सफा र बाँझ वातावरणमा उत्पादन गरिएन, समाधान हुन सक्छ सम्भावित रोगहरु र संक्रमणहरु लाई रोक्न सक्छ। यस कारणको लागि, तपाईंले वैध प्रयोगशाला पत्ता लगाउने पहल गर्नुपर्छ।
वैकल्पिक रूपमा, केहि अनलाइन भण्डारहरूमा जाँच गर्दै उत्कृष्ट विचार हुन सक्छ।
Winstrol अनलाइन खरिद गर्नुहोस्
उच्च गुणवत्ता वाले मानव ग्रेड स्टेनोजोलोल को खरीद को एकमात्र निश्चित तरीका अनलाइन खरीदारी को माध्यम ले छ। तपाईं अन्य राज्यहरूमा ड्रग खरीद गर्न सक्नुभयो जुन स्टेरॉयड निषेधको बारेमा कम हेरचाह गर्दछ, तर यसले जटिल जस्तो देखिन्छ। मेक्सिकोमा, उदाहरणका लागि, एनाबिक स्टेरियोड्सको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने नियमहरू उनीहरूको नागरिकको लागि असीमित छन्।
14। विनस्ट्रोल पाउडर पकाउनुहोस्
40ml @ 25mg / मिलीलीटर 100ml @ 50mg / मिलीलीटर
विनस्ट्रोल पाउडर 1g 5g
190 सबूत अनाज अल्कोहल 31.2ml -
पिग 300 7.5ml -
बेंजिल बेंजोजा - 24ml (24%)
भरी पानी - 62.5ml
बेंजिल रक्सी - 3ml (3%)
McMullin, जीएम।, स्मिथ, सी।, Watkin, जीटी।, Scurr, JH। Venousinolytic वृद्धि को प्रभावशीलता को उपचार मा Stanozolol संग क्षमता, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड जर्नल अफ सर्जरी, अप्रिल 1991।
Kicman, एटी, Anabolic स्टेरॉयड को फार्मेसोलोजी, औषध विज्ञान को ब्रिटिश जर्नल, पीएमसी 2439524, अनलाइन, 2018
फलांगा, वी।, ग्रीनबर्ग, एएस, झोउ, एल, एट अल।, एनाबोलिक स्टेरॉयड स्ट्यानोओसोलोल द्वारा कोलागेसन संश्लेषण को उत्तेजना, NCBI लेख, अनलाइन, डिसेम्बर 1998
बेट्स, पीसी, मिलिड, डीजे, चेवा, LF, एनाबोलिक स्टेरॉइड स्टेनजोलोल को प्रभाव मा वृद्धि र प्रोटीन चयापचय मा चूड, पबमै प्रकाशनहरू, अनलाइन, सेप्टेम्बर 1987
10 चीजहरू तपाईंलाई DMAA लिनु अघि जान्नुपर्छ
संज्ञानात्मक वृद्धि को लागि सर्वश्रेष्ठ नोट्रोप्रोनिक एरिनाटेम पाउडर
ओक्सिम्याथलोन समीक्षाहरू: अल्टाइम गाइड ओक्सिमथोलोन (Anadrol)
टिप्पणीहरू बन्द छन्।
ओक्सिम्याथलोन समीक्षाहरू: अल्टाइम गाइड ओक्सिमथोलोन (Anadrol) शरीरको बिरुवा, खुट्टा, र चक्रमा कच्चा प्रायरोन (मेस्ट्रोलोन)
Boldenone cypionate पाउडर
IDRA-21 पाउडर (22503-72-6)
क्रेनिनो पाउडर (976-71-6)
Nandrolone propionate पाउडर